thinzar's blog: MY HOME TOWN
Labels: photos, တောင်ကြီး
အိမ်က ပြန်လာတာ ရက်ပိုင်းဘဲ ရှိသေးပေမယ့် အိမ်ကို အရမ်းလွမ်းတယ်ဆိုရင် လွန်တယ်လို့ မပြောနဲ့နော်။
ဘယ်တော့မှ ကြည့်လို့ မဝနိုင်တဲ့ တောင်ကြီးမြို့ ရဲ့ အရှေ့ဘက်က တောင်တန်းကြီးကိုလည်း လွမ်းတယ်။ တစ်ချိန်တုန်းက ဆောင်းရာသီမှာ ချယ်ရီတွေဝေနေဖူးတဲ့ ဒီတောင်တန်းကြီးကို မရိုးနိုင်အောင် ထိုင်ကြည့်ချင်သေးတယ်။
မှိုင်းပြာပြာ ကောင်းကင်အောက်က နီရဲရဲခေါင်မိုးလေးတွေနဲ့ အိမ်တွေကိုလည်း လွမ်းတယ်။
မြို့အတက်လမ်းကနေ အောက်ကို ကြည့်ရတာလည်း ပန်းချီကား တစ်ချပ်လိုပါဘဲ။
တစ်တောင်ပေါ် တစ်တောင်ဆင့် ဆိုတဲ့ မြို့ကလေးရဲ့ အလှပေါ့။
ဟင်းထုတ်ကိုလည်း လွမ်းတယ်။ ငါးထမင်းနယ်ကိုလည်း သတိရတယ်။ မနက်စောစောဆို ထိုဖူးနွေး စားချင်တယ်။ Hmmmmm………….
(ဓာတ်ပုံတွေ ကြည့်ပြီး အရမ်းတော်တာဘဲလို့ ချီးကျူးကြတော့မယ်ဆိုတာ ကြိုသိနေတယ်။ း) တောင်တန်းပုံရိုက်တာ ဓာတ်ကြိုးပုံ ဖြစ်သွားတယ်။ မြို့အတက်လမ်းကနေ ကျီးဖြူကန်ပုံကိုရိုက်တာ အုတ်ခုံကြီးပဲ ပါသွားတယ်။ မြို့ပေါ်ကနေ အောက်ကို ရိုက်ထားတာ တောအုပ်ပုံ ဖြစ်သွားလို့။ အဲလို တော်တာ။ ဒါပေမယ့် ဘယ်လို ရိုက်ရိုက် တောင်ကြီးမြို့က လှပါတယ်။)
ပေါက်ကရ ရိုက်လာတဲ့ ပုံတွေကိုကြည့်ပြီး လွမ်းလို့ မဝနိုင် ဖြစ်နေတာ တောင်ကြီး (သို့) ချယ်ရီမြေ ဆိုတဲ့ ဘလော့ကို ဝင်ဖတ်တော့ ခုချက်ချင်း လေယာဉ် လက်မှတ်ဝယ်ပြီး အိမ်ပြန်ပြေးချင်စိတ် ပေါက်မိတယ်။
P.S. အမှန်တော့ ဓာတ်ပုံတင်ဖို့ဘဲ။ စာနည်းနည်းလေး ရေးလိုက်မိတာ လွမ်းချင်း ဖြစ်သွားတယ်။
Interesting. You have the talent to beagood writer.
17/7/07 12:42 PM
ကျွန်တော် လည်း တောင်ကြီး ကိုလွမ်းတယ်။ တောင်ကြီးသားလား ဆိုတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ တောင်ကြီးကို ၃-၄ ခေါက် ရောက်ဖူးတာပါ။ ဒါပေမယ့် တောင်ကြီးက ဖက်ထုပ်ကြော်၊ တို့ဖူးနွေး၊ ဟင်းထုပ်၊ အင်းဝက်သချဉ်၊ ရေစိမ်၊ ငါးထမင်းနယ် စတဲ့ စားစရာတွေ က အစ ၊ အနွေးထည်မျိုးစုံ ဖက်ရှင်လုပ်ဝတ်တဲ့ တောင်ကြီးသူ တွေအလယ်၊ လှပတဲ့ တောင်ကြီးမြို့ အဆုံး….အားလုံးကို သတိရပါသည်။
17/7/07 5:45 PM
hi najma..juz found ur blog. thnks4addin me in ur buddy list.
so, u balik kampung during the vacation? it's good to take time energizing urself b4 facing hectic days during ur final sem. Gd luck!!
20/7/07 2:50 AM
Anonymous >> Thanks uncle.. နောက်လည်း ဒီလို လာလာ မြှောက်ပေးနော် :)
Peti >> ကြုံရင် ထပ်လာလည်ဦးပေါ့။ အမြဲကြိုဆိုနေပါတယ်။ (တောင်ကြီးမြို့မှ)
ifa >> i've added so that i could and visit at any time.. (checking all your moves, heehee :) ) yeah i balik kampung last cuti.. now startahetic sem.. jumpa lagi!
20/7/07 4:59 PM
21/7/07 6:03 PM
ဟာဗျာ ဒီမှာ ဟင်းမကောင်းလို့ စိတ်ညစ်နေတာ။ ခုလိုရေးလိုက်တော့ ပိုဆိုးသွားပြီ။ တောင်ကြီးရောက်ရင် ဝယ်ကျွေးရမယ်နော်။ အဟဲ
ကျွန်တော့ဘလော့ခ်လေးကိုလဲ လာလည်ပါဦး။ www.bluephoenix.blogspot.com
21/7/07 8:53 PM
bluephoenix >> ဒါမှန်းသိ ပိုဗိုက်ဆာသွားအောင် အစားပုံတွေချည်း တင်ပါတယ် : ) ဘလော့ဂ်ကို လာလည်ပါ့မယ်။
ကိုမျိုးကျော်ထွန်း>> ဗိုက်ချာတဲ့ သူ အချင်းချင်း လာတွေ့နေတယ်။ မုန့်ယူလာပေးနော်။ :P
23/7/07 9:05 PM
ကိုပီတီပြောတဲ့အတိုင်း စ လယ် ဆုံး သုံးပါးစလုံးကို လွမ်းပါသည်။ ထိုအလွမ်း ဒီဂရီမြင့်အောင် လုပ်သော မသဉ္ဖာကို ဘလောက်ဂါများဆိုင်ရာ တရားရုံးတွင် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ နာကျင်စေမှုဖြင့် တရားဆွဲဆိုသွားပါမည်။
2/8/07 10:27 AM
ငါးရှည့် ဆေးခါး၊ နှစ်ပြန်ကျော်၊ ချဉ်ငံစပ်၊ ငါးဒုက္ခ
ငါ မစားရတာ ၂ဝ နှစ်၊ ညောင်ရွေကန်၊ ကျီးဖြူကန်၊ ကရင်မ ရေထွက်၊ တောင်ချွန်း၊ ပြီးတော့ ငါ့အိမ်နဲ့ အောက်ဈေး ဝေး … …
22/2/08 6:47 PM
Very nice to see the picture of our home town. I was jsut googling the picture of taunggyi and found your blog. Nice reading your blog.By the way I am sumi originally from Taunggyi, working as an account assistant in London.
25/2/08 10:03 PM
ကိုရဲမွန်>> ဘလော့ဂ်ဂါတွင် အပြစ်မရှိကြောင်းထင်ရှားသည့်အတွက် တရားသေ လွတ်စေ။ :D
မငြိမ်းစု >> အောက်ဈေးနဲ့ ဝေးတယ်ဆိုတော့ အစ်မအိမ်က တက္ကသိုလ်နားမှာလားဟင်?? :)
madison>> nice to know u.. thanks for visiting my blog and leaveacomment
29/2/08 5:57 PM
သဉ္ဇာ နဲနဲလွန်သွားတယ်။ အိမ်က ကန်ရှေ့မှာ… … ဟဲဟဲ
တောင်ကြီးကို ပြန်လို့မရတော့ အားလုံးနဲ့ ဝေးနေတာပေါ့
29/2/08 7:13 PM
အဲဒီထိတော့ မရောက်ဘူး။ ကန်ရှေ့မှာပါ
2/3/08 11:15 AM
မငြိမ်းစု>> ဟုတ်သားဘဲ။ ငါးဒုက္ခ မစားရတာ ၂ဝ နှစ်ဆိုတော့ တောင်ကြီးကောလိပ်က တက္ကသိုလ်ဖြစ်သွားတာ အစ်မ ဘယ်သိမလဲနော်။ ကြာပြီ အစ်မရဲ့။ တော်တော် ပြောင်းလဲသွားပြီ။ အစ်မပြန်ရင် အံ့ဩသွားမယ်။ http://taunggyicherryland.blogspot.com မှာ update တွေ ရှိတယ်လေ။ :)
3/3/08 11:09 AM
http://taunggyicherryland.blogspot.com ကို ရောက်ပီးပါပီ တိုးတက်မှုတွေကတော့ အများကြီးပါ ဒါပေမယ့် ဆုံးရှုံးမှုတွေ ရို မရို မသိရ။ လာလည်သွားတာ ကျေးဇူးပါ။
3/3/08 8:46 PM
It is so great to see some part of Taunggyi picture in your blogs and thanks you for sharing.
can you post some picture around Taunggyi Hotel(Strand Hotel) if you have some.
I missed the feel of morning mist and the noise of early walker.It has been more than 25 years.
Thanks you(Lady with the glasses) in advance
And one more thing if you have time can you teach me how to write in burmese and English.
5/3/08 12:12 AM
မငြိမ်းစု >> အချိန်နဲ့ အမျှတော့ ဆုံးရှုံးမှု တွေလည်း ရှိတာပေါ့ အစ်မရယ်။ သင်္ခါရလို့ ဘဲမှတ်ပါတယ်။ ငယ်ငယ်တုန်းက ဆောင်းတွင်းဆို အရှေ့ဘက် တောင်တန်းကြီးပေါ်မှာ အပြည့်တွေ့ရတဲ့ ချယ်ရီပင်တွေတော့ အခု ပြုတ်ပြုတ်ပြုန်းဘဲ။ ပြန်စိုက်နေတယ် လို့တော့ ကြားတယ်။
Hein>> I don't have Taunggyi Hotel pics. yeah, the morning mist is unforgettable.
I, lady with glasses, also thank u for dropping by. :)
umm..how to write in burmese and english?? လက်နဲ့ ရေးမယ်ဆိုရင်တော့ စာရွက်တစ်ရွက်နဲ့ ဘောပင် တစ်ချောင်း လိုလိမ့်မယ်။ ကွန်ပျူတာမှာ ရေးမယ်ဆိုရင်တာ့ ကီးဘုတ်တစ်ခု တော့ လိုလိမ့်မယ် ထင်တာဘဲ။ :D
7/3/08 10:15 AM
8/4/08 5:22 PM
ကို ဘကောင်း Ba Kaung>> အဲဒီ မိုးနှဲ မျောက်တွေနဲ့ သတိရစရာတွေ ကျန်ခဲ့လို့လားဟင်... ဘယ်နားမှာ ရှိတာလဲ
8/4/08 6:35 PM
မိုးနှဲမျောက်က သောက်လိုက်ရင် တာဝတိသာရောက်သွားစေတဲ့ အရာပါကွယ်။
ko ba kaung>> ဘာလဲဆိုတာ ခုသိသွားပြီ :D အရင်တုန်းက တကယ်ကို မကြားဖူးတာ။
10/4/08 3:23 PM
10/4/08 3:27 PM
Out from Blogosphere forawhile